ရွှေဥသြ: November 2007
Asean Summit ကို မကျေနပ်တဲ့ စင်္ကာပူမှ မြန်မာတွေရဲ့ ဆန္ဒပြပွဲ
(ကိုပေါ) ၏ ဘလောဂ့်မှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြသည်။
Posted by ရွှေဥသြ at 18:180comments
အမေနဲ့ သား (သို့) “သ”၀ဂ်ကထာ
အမေ ကျနော့်ကို မတားနဲ့
ကျနော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ် သွားမှ ဖြစ်မယ်။
အမေ … အမေ့ကိုတော့ ကျနော် တားပါရစေ
အမေ တမလွန် ခရီးကို မသွားပါနဲ့ဦး
ကျနော်တို့ ဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံတော်ဆီ သွားရဦးမယ် အမေ …။
ကျနော် နေပြည်တော်ကို သိမ်းမှ ဖြစ်မယ်။
အမေ … လူ့ဘ၀ကို မသိမ်းပါနဲ့ဦး
ကျနော်တို့ သွေးစွန်းနေတဲ့ သင်္ကန်းတွေ
သွေးစွန်းနေတဲ့ မျက်ရည်တွေ သိမ်းရဦးမယ် အမေ …။
ကျနော် စစ်အာဏာရှင်မှန်သမျှ သတ်မှဖြစ်မယ်။
အမေ ပရိဒေ၀မီးတွေ မသတ်ပါနဲ့ဦး
ကျနော်တို့ အစိုးရအကြမ်းဖက်ဝါဒကို သတ်ရဦးမယ် အမေ
.................. အစိုးရ အကြမ်းဖက်ဝါဒကို
...................................... သတ်ရဦးမယ် အမေ …။ ။
အမေလူထုဒေါ်အမာ ၉၂နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ ဂုဏ်ပြုကဗျာ
အမေ့သား-အောင်ဝေး (၂၃-၁၀-၂၀၀၇) (ခေတ္တ ပုန်းခိုကျင်း တနေရာ)
(မေတ္တာဖြင့် ပုံတူရေးဆွဲပေးပို့လာသော ပန်းချီမင်းကျော်ခိုင်အား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်)
Posted by ရွှေဥသြ at 17:590comments
အောင်ပွဲလမ်းသို့ … ။
(၂၇၊ ၁၁၊ ၂၀၀၇)
Posted by ရွှေဥသြ at 17:560comments
တိုက်ပွဲသို့…
ဘယ်သူ နမ်းကြူရဲသလဲဟေ့ … ။
(၁၉၈၈ ခုနှစ် အရေးတော်ပုံကာလတွင် အမည်မသိ ကဗျာဆရာတဦးမှ ရေးသားသည်)
Posted by ရွှေဥသြ at 17:540comments
Posted by ရွှေဥသြ at 21:400comments
နာကြတဲ့ အသီးတွေ တွန့်လို့သာကြွေ။
ဇာဏီ ကြက်မ သူတွန်လျင်
ကုန်းဘောင်ခေတ် အယူတော်မင်္ဂလာ ဦးနိုးရဲ့ကဗျာပါ။ခု အခြေအနေနဲ့ ချိန်ထိုး ကြည့်နိုင်ကြဖို့ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by ရွှေဥသြ at 21:060comments
လောကေလောက၌ ၀ီသံ အဆိပ်ကို ၀ီသံက္ကူတိ အဆိပ်ဟူ၍ န အာ ဟု မဆိုကုန်။သံဃသ သံဃာတော် ၏ ဓနံ
ဥစ္စာကို ၀ီသံက္ကူတိ အဆိပ်ဟူ၍ အာ ဟု ဆိုကုန်၏။
အဆိပ်သည် တစ်ဘ၀ ကိုသာ သတ်တတ်၏။
သံဃာတော် တို့၏ ဥစ္စာကား ဘ၀ပေါင်းများစွာကိုသတ်တတ်၏။
Posted by ရွှေဥသြ at 21:020comments
Posted by ရွှေဥသြ at 20:490comments
၈၈ အစ ဒီပဲယင်းအလယ် ၂၀၀၇ အဆုံး
Posted by ရွှေဥသြ at 20:130comments
၉၂ ပြည့်မွေးသမိခင်သို့ ပေးစာတစောင်
မသဲလှပေမဲ့ အသဲကတော့ ကျင်နေတယ်
နောက် - အရာတော်
အရှေ့ကိုတဲ့ ထွက်ခဲ့တယ်’ ဆိုတာလေ။
အမေ့ရဲ့သားမှာ ၁၃၀၀ ရတီ*
အမေလည်းကျန်းမာအောင်နေတယ်” တဲ့။ ။
* ၁၃၀၀ ပြည့်မျိုးဆက်ကိုညွှန်းတာပါ။
Posted by ရွှေဥသြ at 20:090comments
ကျနော်မမြင်ဘူးလိုက်သော ကျနော့်သူရဲကောင်း ဦးသန့်
Posted by ရွှေဥသြ at 22:320comments
Posted by ရွှေဥသြ at 08:310comments
Posted by ရွှေဥသြ at 08:280comments
၀၆၊ ၁၀၊ ၂၀၀၇
Posted by ရွှေဥသြ at 08:250comments
သစ္စာဆုတောင်း ပြည့်စေသတည်း။ ။
Posted by ရွှေဥသြ at 08:200comments
တည်ငြိမ်စွာနဲ့ နာကြားနိုင်မယ်ဆိုရင် ….
အရိပ်တကြည့်ကြည့် ဖြည့်ဆည်းခဲ့ရတဲ့ အရာရာကို
အင်မတန်မှ သေးငယ်တဲ့ တန်ဆာပလာ အရာရာနဲ့
သူများတကာ လုပ်ပြီးသွားကြလို့ အချိန်အတော်ကြာမှ
အားနဲ့မာန်နဲ့ ဇွဲသတ္တိရှိရှိ ဆက်ကြိုးစားနိုင်မယ်ဆိုရင်….
ခိုင်မာစွာနဲ့ပဲ ဆက်လက် ဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်…..
စောင့်သင့်တဲ့ အချိန်ကို စောင့်နိုင်ပြီး
အဲဒီအတွက်လည်း မမောမပန်း နေနိုင်မယ်ဆိုရင်….
မဟုတ်တရား မုသားစကား ကြားရတဲ့အခါ
မင်းကို လူတကာက ၀ိုင်းဝန်း မုန်းတီးတဲ့အခါ
မင်းဟာ အမုန်းတွေ ပြန်မပွားဘူးဆိုရင်…
မင်းကိုယ်မင်း လူတော်တယောက်ရယ်လို့ မမြင်ဘဲ
ပညာရှိ စကားတွေလည်း မပြောဘူးဆိုရင်….
မင်းအပေါ် မလွှမ်းမိုးစေဘဲ စိတ်ကူးနိုင်မယ်ဆိုရင်….
မျှော်မှန်းချက် သက်သက်သာ မဖြစ်စေဘဲ တွေးခေါ်နိုင်မယ်ဆိုရင်…
အောင်မြင်မှုသုခနဲ့ ဆုံးရှုံးမှု ဒုက္ခတွေကို ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါ
တူညီသော လောကဓံတရားတွေပါလား ရယ်လို့
လူတွေနဲ့ ထိတွေ့ပြောဆို ဆက်ဆံရတဲ့အခါ
မင်းဧကရာဇ်တွေနဲ့ အတူ လမ်းလျှောက်နေရပေမယ့်
မင်းကို သိပ်ပြီးနာကျည်းအောင် မလုပ်နိုင်စေရင်….
လူတိုင်းကို တန်ဖိုးထား လေးစားရပေမယ့်
စွဲလမ်းမှု သံယောဇဉ်တွေ ထားမနေဘူးဆိုရင်….
တိုတောင်းလှတဲ့ မပစ်ပယ်နိူင်တဲ့ တမိနစ်အတွင်းမှာ
အရာရာ ဘာမဆို မင်းစွမ်းနိုင်ပြီပေါ့…
ယောင်္ကျားကောင်း တယောက်ပဲပေါ့….။ ။
RUDYARD KIPLING ၏ If ကို - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ဘာသာပြန်သည်။
And risk it on one turn of pitch-and –toss.
Except the Will which says to them: “ Hold on:!”
Posted by ရွှေဥသြ at 08:100comments
ခင်ဗျား ….. ထပါ
တရားတာ - မတရားတာဟာ စကားအရာနဲ့
ဘီဘီစီ ဗွီအိုအေ ရေဒီယို ကက်ဆက်
ဆင်ခြေ မြင်းခြေ အသင်္ချေကို
ဈေးဆိုင်၊ ကနားကြောင့် ဘေးထိုင်နားနေသလား
ဘာလဲ … လက်ရှိနဲ့လက်မဲ့ ဆိုတဲ့စကား
ဒီမှာ … ခင်ဗျားပါရင် တအား
အားလုံး အားလုံး ပါဝင်ပြီး
မြက်ပင်တွေနဲ့ ကျစ်တဲ့ `လွန်´ ဟာ
ရေမှုန်လေးတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ `လှိုင်း´ ဟာ
ထ … ထစမ်းပါ။
Posted by ရွှေဥသြ at 00:500comments
Posted by ရွှေဥသြ at 00:410comments
သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်ဆီက သတင်းစကား
Posted by ရွှေဥသြ at 00:360comments
Posted by ရွှေဥသြ at 00:350comments
Asean Summit ကို မကျေနပ်တဲ့ စင်္ကာပူမှ မြန်မာတွေရဲ့ ...